गुणवत्ता र सेवा - दिमाग जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र विश्राम
यसको विपरित रूपमा, मैले पाएँ भने धेरै भिन्नताहरू मैले देखेको छु डेभिड प्रसन्न प्रो TruVu चश्मा संग। मैले धेरै बर्षसम्म महसुस नगरेको भावनाहरू महसुस गरें। म वास्तवमा मेरो शरीरलाई शान्त गर्न सक्छु। मेरो दीर्घकालीन गम्भीर उदासीनता सकियो। मेरो नकारात्मक आत्म-कुरा एकदम कम भएको छ। म स्तुति गर्दछु र मौनताको आनन्द लिन्छु। म बाहिर धेरै सुन्दरता देख्छु। म अहिले उपस्थित छु। आदि।
माइकलले मलाई धेरै सहयोगी जानकारी दिएका छन्, मेरो धेरै कलहरूको जवाफ दिएका छन् र मेरा धेरै प्रश्नहरू लिएका छन्, र अझ धेरै दयालु र इमानदार भएको छ। म उहाँलाई उदार र काम गर्न को लागी दुबै पाउन। यो एक व्यापारी संग कुरा गर्न र ईमान्दारीपूर्वक विश्वास उसले तपाईको लागि के राम्रो छ र म त्यो विभाग मा skeptical पक्ष मा विश्वास गर्न राम्रो लाग्छ। यसबाहेक, माइकल यसका निर्माता होइनन् डेभिड प्रसन्न प्रो ताकि तपाईं अन्य उपकरणहरूको बारेमा पनि खुल्लमखुल्ला बोल्न उहाँसँग सहज महसुस गर्न सक्नुहुन्छ डेभिड प्रसन्न प्रो.
म इमानदारीता बिना मेरो बाँच्न सक्दैन डेभिड प्रसन्न प्रो। यसको CES एक्लै कार्यले अमेरिकी मोडेलको गुणस्तर पार गर्छ! तर यति धेरैको साथ एक उपकरण छ! यो सीईएस र अडियो र दृश्य प्रविष्टि को एक उत्तम फ्यूजन। म यो उपकरण अरूसँग साझेदारी गर्न सक्षम भएको छु। मेरो श्रीमान् वायुसेनाको २ 23 बर्षे अनुभवी हुनुहुन्छ र युद्धबाट घर फर्केका वेटरनहरूसँग काम गर्छन्। यो यति धेरै मूल्यवान हुन्छ PTSD vets को लागी दर्द र उदासी कम गर्न मद्दत पुर्‍याउन र तिनीहरूको मानसिक ध्यान फिर्ता लिन। यसले मलाई डिप्रेसन र फाइब्रोमाइल्जिया दुखाइका साथै मसँग सहयोग पुर्‍यायो एडीएचडी। धन्यबाद, मैले यो आश्चर्यजनक कम्पनीको बारेमा थाहा पाइन!
मरीना Tchistaia बाट प्रशंसापत्र
"महान ग्राहक सेवा! दुबै प्राप्त गर्न र फर्काउने दुवै छिटो र तनाव रहित थियो। भर्खर यसलाई मेल गरीएको र केहि दिनमै फिर्ता रकम प्राप्त भयो। यद्यपि ओएसिसले मेरो विशेष अवस्थामा सहयोग पुर्‍याइरहेको देखिँदैन, म एकपटक मेरो परीक्षण परिणाम र निदान समाप्त भएपछि अर्को उपकरण प्राप्त गर्ने विचार गर्दैछु। केवल धन्यवाद दिन चाहन्छु मन जिउँदो उनीहरूको कुशल कामको लागि फेरि टीम। ”
जो क्रूकबाट प्रशंसापत्र
म सँग डेभिड PAL-36 लगभग आठ बर्ष को लागी गरीएको थियो। र अब डेभिड प्रसन्न। तपाईं अद्भुत उत्पादनहरू बनाउनुहुन्छ; र दयालु, उदार, र तपाईंको ग्राहकहरु संग व्यवहार मा ईमान्दार छन्। र म साच्चै यसको कदर गर्छु!
डिसेम्बर 6, 2014
गुलाब केबाट प्रशंसापत्र
ओह, संयुक्त राज्य अमेरिका
“मैले भर्खरै डेभिडको लागि मेरो अर्डर प्राप्त गरें प्रसन्न प्लस र OASIS प्रो। म तपाइँलाई तपाइँको प्याकेजि quality र गुणवत्तामा बधाई दिन चाहन्छु। केहि तपाइँको उत्पादनहरु संग तुलना। मैले विगतमा एक प्रतिस्पर्धीको उत्पादन किनेको थिएँ, र यो ठीक छ, म शरीर र दिमागमा विश्रामको नतिजाको नजिक कतै जान सक्दिन किनकि मैले तपाईंको उत्पादनहरू गरेँ।
तपाईको मेशिनमा समावेश भएका केसहरू शीर्ष गुणवत्ताका हुन्छन् र के चीजहरू सुरक्षित राख्नको लागि आवश्यक हुन्छ र तिनीहरूलाई आफूसँग लैजान सक्षम हुन। तपाइँलाई तपाइँको उत्पादनहरुको गुण मा गर्व गर्नुपर्छ। "
".5.0.० मध्ये stars ताराहरू एक राम्रो निर्मित गुणवत्ता मशीन।
मैले यसलाई -3-१०-२०१ on मा अर्डर गरें, र आज यसलाई २-२२-२०१ received प्राप्त गरें।
धेरै राम्रो देखिने मेसिन। म एकाईको क्वालिटीबाट धेरै खुसी छु। चश्मा सुपर उत्कृष्ट छ र ती मा एक राम्रो नरम रंग छ, हेडफोन धेरै राम्रो गुणवत्ता को हो, धेरै राम्रो आवाज उनीहरु बाट आउँदैछन्। को डेभिड प्रसन्न प्लस मूल्य र प्रतीक्षा लायक छ।
मेसिन आफै राम्रो डिजाइन गरिएको छ। मेरो मुटुको धडकन म सास फेर्न नसकेसम्म सास फेर्न मद्दत पुर्‍याउँछु। त्यसो भए यो उपयोगीमा आउँदछ। तपाईं मुटुको धडकन ध्वनि कम गर्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई उठाउन, वा यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
मसँग धेरै सक्रिय दिमाग छ, सँधै सोच्दछु, त्यसैले मलाई लगातार धेरै रातहरू सुत्न गाह्रो लाग्छ। म हिजो रात निदाएको छैन, त्यसैले मैले यो दिएँ डेभिड डिलिट प्लस द्रुत परीक्षण ड्राइव। मैले ओछ्यानमा पल्टें, चश्मा, हेडफोनमा स्लिप भयो र मेसिनमा स्विच गरें, मैले यसलाई ध्यानमा राखें। केही मिनेट वा त्यस पछि, म भुल्दै जाँदै थिएँ, तर म बाहिर जानुभन्दा अघि मैले मेसिन बन्द गरेर ओछ्यानबाट ओर्लें। यो सब भन्दा छिटो हो जुन म सुत्दै छु - सुन्दर मात्र। को डेभिड डिलिट प्लस यसमा निर्मित नरम अन र सफ्ट अफ मेकानिजम छ। यो नरम तर स्थिर सुरु गर्दा आवाज उचाल्छ, सत्र को अन्त को नजिक जब यो आवाज कम गर्न। यो अचानक ठूलो स्वरले शुरू हुँदैन, वा अचानक बन्द हुन्छ। राम्रो सोचेको।
मैले रातमा आँखाको गोबरहरू टिप्न मद्दत गर्नका लागि यो मेशिन खरीद गरें - यस्तो लाग्दछ कि यो मेसिनले गर्ने छ। म खरीद अनुभव संग धेरै राम्ररी खुसी छु।
धन्यवाद मेरो साथीहरु तपाईको समय को लागी। "
बेलुका ११:१:11 तिर म ओछ्यानमा हाले र यसबाट बकबक गरें डेभिड डिलिट प्लस: हेडफोन, लाईट ग्लासमा राख्दै, छेउमा भएको मेशिनको साथ। मैले आइकन मूनलाईटमा तेस्रो सत्रमा सत्र सेट गरें, यो निन्द्रा सत्रहरू हो। त्यहाँ प्रत्येक आईकन अन्तर्गत पाँच सत्रहरू प्लस (+) आईकन बाहेक, जुन त्यहाँ तपाईंको आफ्नै पाँच थप्नको लागि हो।
मलाई याद थाँहा थाँहा थाँहा थाँुँ कि मुठो उठेर र हेडफोन र चश्मा हटाउँदा, फेरि निदाएको। म आज बिहान :8:२:25 बिहान उठेँ, पूर्ण आराम पाएको महसुस गरें। मसँग त्यस्तो मस्तिष्कको मृत अनुभूति थिएन, जस्तो कि मसँग सामान्यतया कुनै निद्रा नभएको बेला, वा आंशिक निद्रा नभएको।
म जानको लागि ओछ्यानबाट माथि चढें र ऐनामा हेराई यस दृश्य दृश्यहरू हेर्नका लागि - कुनै झुकाव अनुहार, कुनै थकित आँखा, आँखा मुनिका थोरै झोलाहरू: जसले सबैले स my्केत गर्दछ कि म मेरो टाउकोमा आराम गरिरहेको छु। सही थियो। तर, मैले अहिलेसम्म गरिन।
मैले पछाडि जानुहोस् र तल झर्ने र बिहानको बिहान निर्णय गरे डेभिड डिलिट प्लस, र मूड सत्रहरूमा जानुहोस्, जुन मैले गरेको थिएँ, जुन तेस्रो सत्रमा सेट गरियो। मेरो बारेमा थोरै बारे तल मैले तपाईंलाई यो सत्र कसरी काम गर्ने भन्यो:
धेरै समय अगाडि, मेरो सम्बन्ध विच्छेदको समयमा, म एक मनोविज्ञानीसँग मेरो भावनाहरू कुरा गर्न गएँ, उनले मलाई सीमा रेखा उदासीनताको रूपमा जाँच गरे: जसको अर्थ हो कि म थोरै आनन्दित छु, कुनै गम्भीर छैन। उदाहरण: त्यो त्यो केटो / केटी हो जो अफिसमा कहिल्यै आउँदैन - मुस्कुराउँदै, तर सोच्दैन कि संसारको अन्त्य हुँदैछ। त्यसोभए तपाईंसँग ती प्रकारहरू हुन्छन् जुन सधै सामान्य माथिको सीमा रेखामा सधैं मुस्कान प्रदर्शन गर्दछन्।
म सीमा रेखा थियो निराशधेरै मेरो सम्पूर्ण जीवन व्याख्या गर्नुहोस्। कुनै गम्भीर छैन: म अरूको हाँसोको बारेमा हाँस्नेछु-अधिक चीजहरूको बारेमा - तर म कहिल्यै हाँसोको थालनी गर्दिन। म खुशीको साथ पहिले हाँसेको सुरु गर्न पाएको छु। त्यसो भए, सीमा रेखा उदासी कुनै गम्भीर कुरा होइन, र यदि तपाईंले राम्ररी हेर्नुभयो भने, तपाईं अरूमा यो देख्नुहुनेछ। अब फिर्ता डेभिड डिलिट प्लस र मुड सत्र:
मुड सत्रबाट पार गरिसकेपछि, मैले सबै टाढा राखें, कोठामा सबै सीधा गर्न थाले। मैले केहि मिनेट पछि याद गरें, मैले मुस्कान लगाएको थिएँ? पहिलो, यो मेरो जीवनमा देखिन्छ। म टिभी हेरिरहेको थिएन, रेडियो सुन्दै थिएँ, र मैले खाजा पनि खाइन। यो केवल बाट हुन सक्छ डेभिड डिलिट प्लस। स्पष्ट रूपमा, मूड सत्र एक हल्का उदासीनतालाई सीमा रेखा खुशीमा परिवर्तन गर्न मात्र पर्याप्त थियो?
मलाई थाहा छैन कि यसले कत्तिको राम्रोसँग काम गर्ने छ जससँग एक धेरै गम्भीर उदासीनता समस्या भएको छ, कि केहि चीजको लागि अनुसन्धान गर्न वा उनीहरूको डाक्टरसँग कुरा गर्न। मलाई थाहा छ मेरो हल्का उदासीनताको लागि, मूड सत्रले काम गर्यो - यो सत्रबाट धेरै घण्टा पछि पनि हो।
मलाई थाहा छैन यदि यो स्थायी फिक्स हुन गइरहेको छ वा यदि मैले प्रत्येक दिन सत्र गर्नु पर्छ भने? म यो केहि बाहिर काम गर्न को लागी कहिलेका लागि यसलाई अनुगमन गर्दछु। "
लिन्डा जीबाट प्रशंसापत्र
NE, संयुक्त राज्य अमेरिका
“म धन्यवाद दिन चाहन्छु मन जिउँदो तपाइँका उत्पादनहरूका लागि। यो सानो प्रशिक्षण इकाई म र मेरो नातिनाति दुबैको लागि ग्याडसेन्ड भएको छ - यसले पक्कै पनि हाम्रो जीवनलाई अझ राम्रो र अझ राम्रो बनाएको छ! म यी मान्छेहरु लाई धन्यबाद दिन चाहन्छु जसले यी उत्पादनहरु को विकास गर्‍यो, र सबै कर्मचारीहरु जसले यसलाई सम्भव बनाउँछ हामी मध्ये धेरैलाई अझ खुशीको जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपाईले गर्नुहुने कुरामा गर्व गर्न सक्नुहुन्छ - र म तपाईको तारिख ग्राहक सेवा लाई कदर गर्छु! "
"क्यारोलले मेरो सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन एकदमै राम्रो गर्नुभयो।"
डा। रोबर्ट ई। म्याककार्तीबाट प्रशंसापत्र
“मलाई तपाईंको व्यवसाय अभ्यासहरूको बिल्कुल सराहना गर्न दिनुहोस्। आजको समयमा, तिनीहरू स्फूर्तिदायी र प्रशंसनीय छन्। हामीले केहि बिरामीहरूबाट तपाईंको फोन सेवा सहयोगको बारेमा महान प्रशंसा सुनेका छौं। कम्पनीसँग काम गर्न पाउँदा राम्रो लाग्छ कि हामीले यस प्रकारको चम्किलो प्रतिक्रिया सुन्दछौं ... राम्रो काम जारी राख्नुहोस्! "
Kristin Birks बाट प्रशंसापत्र
"मेरो डेभिड डिलिट प्रोको तपाईंको द्रुत लदानको लागि धन्यवाद। मैले बिहीबार बन्द गरेको पछि यसलाई अर्डर गरें र फेडएक्सबाट भर्खर सोमबार बिहान प्राप्त भयो। यो एकदम स्फूर्तिदायी र कायाकल्पित छ। एक TERRIFIC अनुसंधान र प्रमाण आधारित उत्पादन बनाउन र क्यानाडाई भएकोमा धन्यवाद। म पनि क्यानाडीली हुँ। म टोरोन्टोबाट हुँ, तर अस्थायी रूपमा अमेरिकाको क्यानाडाको उद्योगमा स्नातक स्कूलमा पढ्दै छु! तपाईंको कम्पनी चट्टानहरु! "
Guido Maday बाट प्रशंसापत्र
"बहु-रंग Tru-Vu Omniscreen आईसेटहरू अभूतपूर्व हो किनभने मेरो मुडमा वा जुन म जुन स्तरमा पुग्न चाहन्छुमा निर्भर हुन्छ, म अनुरूप रंग परिवर्तन गर्दछु! तिनीहरू उत्कृष्ट छन् र मेरो टोपी डेभिड र तपाईंको टोलीको लागि बन्द छ यस उत्पादनको यस रत्नको साथ आउँदैछ! ”
क्रिस्टोफर ओलिभरबाट प्रशंसापत्र
AV3X DVD को सिर्जनाकर्ता, www.av3x.com, www.Mindmachines.com
"म प्रेम गर्छु डेभिड प्रसन्न प्रो। मामला ठोस हो र यसले गुणस्तरीय शिल्पकारीको भावना राख्छ। यो धेरै पातलो र परिष्कृत छ धेरै धेरै शीर्ष मेशिनहरूको विशिष्ट धातु ईंट डिजाइनको तुलनामा। एकाईको अपरेशन सहज र स्फूर्तिदायी सरल छ।
L र R गोलार्धको लागि सटीक फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रण कायम गर्दा डुअल फ्रिक्वेन्सी हेमिसपिक चश्माले आश्चर्यजनक दृश्य प्रभावहरू सिर्जना गर्दछ। तिनीहरू हातहरू उत्तम बनाइएको, सब भन्दा ठोस भावना LS चश्मा / प्रकाश फ्रेमहरू जुन मैले कहिल्यै प्रयोग गरेको छु। धेरै LS चश्माहरु यस्तो लाग्छ कि उनीहरु एक ग्यारेजमा बनेका थिए। त्यहाँ उनीहरूलाई एक कच्चा, हस्तनिर्मित / घर बनाउने पक्ष छ - जिप टाईबाट हात काटिएको थियो जब तार इयरपिसको माध्यमबाट चश्माको भित्री भागको “बेअर बोर्ड दृश्य” मा जान्छ। तपाईका सब भन्दा धेरै "कारखाना सफा" छन् जुन मैले कहिल्यै देखेका छैनन्। रंग परिवर्तन गर्ने बटनहरू प्रतिभाशाली हुन्छन् कि ती यति एर्गोनोमिक र सरल छन्।
CES इयर क्लिपहरू वास्तवमै एक प्रदर्शन-स्टुपर हो। यो सब भन्दा सुविधाजनक CES कार्यान्वयन हो जुन मैले कहिल्यै प्रयोग गरेको छु र मैले धेरै प्रयोग गरेको छु। केवल तिनीहरूलाई क्लिप गर्नुहोस्, नुन, कुनै जेल, कुनै टाँस प्याडहरू आवश्यक पर्दैन!
म यो प्लेटफर्ममा केहि प्रोग्रामिंग गर्न उत्साहित छु। "
पल रिचार्ड हेंडबाट प्रशंसापत्र
अल्टन, संयुक्त अधिराज्य
अप्रिल 20, 2007
"डेभिड धेरै शक्तिशाली छ। मलाई चश्मा मन पर्छ, जुन धेरै राम्रो छ - मेरो (प्रतिस्पर्धीको उपकरण) मा ठूलो सुधार। साथै अडियो इनपुट मलाई अलग सीडी / एमपी3भोल्युम नियन्त्रण गर्न दिन्छ, त्यसैले म धेरै राम्रो गुण ध्वनि प्राप्त गर्दछ। DAVID बाहिरी ध्वनी समावेश गर्न को लागी धेरै रमणीय एकीकृत समाधान हो, र अधिक आरामदायक। समग्रमा, यो एक महान उत्पादन जस्तो देखिन्छ। मलाई एकीकृत सीईएस मन पर्छ - यसको प्रकारको बजारमा मात्र मैले देख्न सक्ने उत्पादन। राम्रो काम! मेरो DAVID केहि अधिक अन्वेषण गर्न अगाडि हेर्दै ... "
चक वर्डबाट प्रशंसापत्र
ताल वन, क्यालिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
“म डेभिडसँग कत्ति प्रभावित भएको छु भन्न चाहान्छु। मसँग DAVID को बाहेक अन्य दुई प्रकाश र ध्वनी मेशिनहरु छन् र मलाई पक्का लाग्छ तिनीहरू राम्रा प्रकाश र ध्वनि मेशिनहरू हुन्, तिनीहरू DAVID को स्तरमा छैनन्। म अनुभव को सरासर गुणवत्ता को बारे मा धेरै प्रभावित छु! म अत्यधिक नाटकीय आवाज लिन चाहन्न, तर पहिलो पटक मैले डेभिडमा सत्र चलाउँदा म यत्तिको गहिरो प्रभाव पाएको छु कि यसको अभिव्यक्ति कम गर्न मलाई लगभग आधा घण्टा पछि बस्नुपर्‍यो। म यो समयमा सोच्न थालें कि मलाई थाहा थिएन कि लाइट र साउन्ड मेशिनले त्यसो गर्न सक्दछ! स्पष्ट रूपमा यसले मेरो अन्य दुई मेशीनहरूको मजा र प्रयोग बर्बाद गरेको छ।
OAIS सँग मिल्ने डेभिड एक धेरै शक्तिशाली दिमाग उपकरण हो! म या त को बारे मा पर्याप्त राम्रो कुरा भन्न सक्दैन! म अन्तमा दुबै किनेकोमा धेरै खुसी छु! म केवल पहिले चाहन्छु कि मैले यो पहिले गरेको हुँ! मलाई मेरो डेभिड धेरै मनपर्दछ र आउन लामो समय सम्म यसको प्रयोग गर्ने आशा राख्नुहुन्छ! ”
जेरेमी र नोरा Yuen बाट प्रशंसापत्र
एडमन्टन, अल्बर्टा, क्यानडा
अक्टोबर 5, 2006
“आज हामी तपाईंको स्टोरमा एडमन्टनमा थियौं र तपाईंको एक बिक्री कर्मी क्यारोल स्प्यारोबाट अद्भुत सेवा प्राप्त ग .्यौं। उनी प्रोफेशनल, मैत्री, सहयोगी र जानकार थिइन। उनको दया र हास्य भावना अत्यन्त स्फूर्तिदायी थियो। एडमन्टनको आर्थिक उथलपुथलमा, धेरै फुटकर स्टोरहरूबाट राम्रो सेवा उल्लेखनीय रूपमा अभाव रहेको छ। यस्तो उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरीएकोमा यो अचम्मको कुरा हो। "
डेभिड स्पेलम्यानबाट प्रशंसापत्र
गेनिस्भिले, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका
अगस्ट 3, 2004
"मेरो प्रश्नहरूको व्यक्तिगत जवाफ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। तपाईंको उत्पादनहरूले बजारमा अन्य मेशिनहरूलाई खेलौना जस्तो देखिन्छ। ”
फिल म्याकोन्कीबाट प्रशंसापत्र
फेब्रुअरी 6, 2004
“वाह! यस वस्तुको द्रुत शिपिंगका लागि म तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु! यस एकाईको बारेमा सबै कुरा 'क्वालिटी' भन्छ। मैले यसलाई आज १२::12० EST मा प्राप्त गरें। मैले भर्खरै ध्यान सत्र समाप्त गरें ... .. धेरै आराम! म पक्का छु कि यो फाईदाको सुरू मात्र हो, जुन म डेभिडबाट लिने छु।
मलाई लाग्छ कि सबैजनाले यी एकाइहरूको स्वामित्व लिनुपर्दछ। फेरि फेरी ... .ति धेरै धन्यवाद! "
लाइने लाडौसेरबाट प्रशंसापत्र
Ste थेरेसे, क्युबेक, क्यानाडा
अगस्ट 19, 2003
“मैले भोली कल बोलाएको थिएँ DAVID मा केहि जानकारी लिनका लागि, र पछि मेरो साथी, जेरी बार्बियरो, तपाईंलाई अर्डर राख्न फिर्ता बोलाए। म भर्खर तपाईको महान सेवा को लागी धन्यवाद भन्न चाहान्छु!
ठीक छ, फेडएक्स आज बिहान ११::11० तिर मेरो ढोका अगाडि पल्टियो! तपाईको महान सेवा र अत्यन्त चाँडो सेवा को लागी फेरी धन्यबाद। "
जोन टार्बटनबाट प्रशंसापत्र
नेवार्क, ओहायो, संयुक्त राज्य अमेरिका
फेब्रुअरी 7, 2003
"कृपया डेभलाई अगाडि पठाउनुहोस् उहाँलाई मसंग त्यस्तो रमाईलो कुराकानीको आनन्द लिने मौकाको लागि। यो ठ्याक्कै सार्वजनिक दृष्टिकोणको प्रकार हो यो गुणस्तरको बारेमा तपाइँको कम्पनीको दृष्टिकोणसँग अनुरूप। म स्पष्टसँग तपाइँ के गर्छ र तपाइँ के बनाउँनुहुन्छ प्रचार गरेर रमाईलो गर्छु। मलाई आशा छ कि यो स्थिरता कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। र म फेरि मेरो गग्गलमा पट्टा पर्खिन सक्दिन, यो गर्न सधैं खुशी हुन्छ। र यो पनि एक खुशीको कुरा हो कि म यो उपकरणमा निर्भर गर्न सक्दछु गर्न को लागी जारी राख्न को लागी लामो समय को लागी डिजाइन गरिएको छ। मेरो निरन्तर धन्यवाद। "
गेल फेरिसबाट प्रशंसापत्र
ओलम्पिया, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका
जनवरी 17, 2003
"व्यक्तिले मलाई फोनमा मद्दत गरेका छन् धेरै सहयोगी छ - मलाई खुशी छ कि मैले कुर्नु वा सन्देश छोड्नु पर्दैन!"
जेम्स रबेबाट प्रशंसापत्र, उन्नत मन विकास
भर्जिनिया बीच, कनेक्टिकट, संयुक्त राज्य अमेरिका
डिसेम्बर 17, 2002
"मैले धेरै प्रकाश र साउन्ड मेशिनहरू प्रयोग गरेको छु, तर ती सबैको अगाडि यो प्रकाश वर्षहरू हो।"
भिन्सेन्ट म्याग्न्टीबाट प्रशंसापत्र
डिसेम्बर 6, 2002
“मैले ओएसिसलाई एक हप्ता भन्दा कम समयको लागि प्रयोग गरिरहेको छु र मैले यसका फाइदाहरू महसुस गरें। राम्रो भयो - उपकरणको राम्रो टुक्रा। "
केन कारबाट प्रशंसापत्र
ह्यामिल्टन, ओन्टारियो, क्यानाडा
जुलाई 31, 2002
“मैले पहिलो पटक व्यक्तिगत अनुसन्धानमार्फत प्रकाश र ध्वनि फेला पारे र बिनौरल बीट प्रोग्राम ब्रेनवेभ जेनेरेटर भेट्टाएँ। ठीक छ, म कुनै पनि समयमा प्रकाश र ध्वनी प्रयोग गर्न को सुविधा को लागी चाहन्थी, त्यसैले मैले रातो र हरियो LEDs को साथ एक फोटोनिक्स म्यूज खरीदें। मैले केहि महिनाको लागि यसलाई प्रयोग गरें र त्यसपछि डेभिड भर नपुगुञ्जेल सम्म वास्तवमै कुनै चासो थिएन। मलाई DAVID को बारेमा केही महिना फोटोनिक्स किनेको थाहा थियो तर मलाई यो बच्चाको कति पन्च थियो भनेर थाहा थिएन।
केही समयको लागि डेभिड प्रयोग गरिसकेपछि, म मेरो फोटोसनिक्समा फर्कें तर केही कारणले गर्दा म यसलाई अधिक प्रयोग गर्न सक्दिन, यो शाब्दिक जैविक रूपले मलाई निराश बनाइरहेको थियो। केही कुराकानी गरिसकेपछि मैले पनि याद गरें मन जिउँदो सीईओ, डेभ सिभर, कि जब मेरो आँखा बन्द गरियो म वास्तवमा हल्का उत्तेजक जम्पको वरिपरि देख्न सक्छु र यसले निश्चित रूपमा प्रभाव पार्दछ। brainwave entrainment। मैले मेरा साथीहरू दुबै मेशिनहरू प्रयोग गरेको पनि छु र सबैले सोच्दछन् कि डेभिड चट्टानहरू।
डेभ सीभर मसँग लामो समय टेलिफोनमा थिए र उनले मलाई कुनै पनि हालतमा हतार गरेनन्, मेरा सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिए, र मैले उसलाई यस क्षेत्रमा ज्यादै रुचि राख्ने मानिस भएको पाए।
मलाई डेभिड मेशिन मनपर्दछ र म्यूजिकको साथ मिक्स गर्न कोसिस गरेको छु, कहिलेकाँही कुनै आवाज वा सीधा ध्वनीको साथ पनि र यसले सँधै ठूलो प्रभाव पार्दछ। यदि तपाईं ध्यान गर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई पक्कै थाहा हुनेछ कि चाँडै वा पछि दृश्य कोर्टेक्सले शानदार दृश्यहरू उत्पादन गर्दछ, र डेभिडले निश्चित रूपमा यो गर्दछ। "
ट्रेसी म्याक्लिनबाट प्रशंसापत्र
क्विन्सी, मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका
जुलाई 4, 2002
"मसँग Tru-Vu Omniscreen चश्मा संग एक DAVID छ। मलाई आईसेट मनपर्छ किनभने तिनीहरूले पछि अर्को प्रकाश र ध्वनि मेशिनहरू गरे पछि छवि छोड्दैनन्। मलाई थाहा छ किनकि मसँग नोभा प्रो १०० र मास्टरमाइन्ड लाइट र साउन्ड मेशिन पनि छ। मलाई यो तथ्य पनि मन पर्छ कि ओम्निस्क्रिन चश्मा रंगीन प्रकाश फाइलरको साथ आउँदछ ताकि तपाईं उनीहरूलाई रंग चिकित्साको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य कम्पनीहरुबाट चश्माका साथ यदि तपाई र color थेरापीका लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले प्रयोग गर्न चाहानु हुने प्रत्येक र for्गको लागि नयाँ जोडी चश्मा किन्नु पर्छ।
मेरो डेभिड एकाई आराम, आकर्षक सपना देख र सुत्न प्रेरित गर्नमा छिटो देखिन्छ। मलाई मेरो डेभिड मनपर्दछ र म मेरो ओम्निस्क्रिन चश्मा मन पराउँछु। ”
जोन लेजरबाट प्रशंसापत्र
अगस्ट 10, 2001
"मैले भर्खर तपाईलाई थाहा दिन चाहान्छु कि मैले तपाईको पुस्तक" The Rediscovery of अडियो-दृश्य प्रविष्टि टेक्नोलोजी "र मलाई लाग्छ कि यो प्रकाश र ध्वनि मेसिनहरूको बारेमा गम्भीर सबैको लागि उत्कृष्ट पुस्तक हो! पुस्तक स्पष्टसँग लेखिएको छ र राम्रोसँग राखिएको छ; यो पहिलो पुस्तक हो जुन मैले पार गरें जुन संक्षिप्त रूपमा फोटिक उत्तेजना प्रविधिको चरण-देखि चरणबद्ध गर्दछ। यसले मेरा सम्पूर्ण आँखा यस सानो विषयमा थोरै फराकिलोमा खोलेको छ। धन्यवाद! "
क्याथी एस होउलीबाट प्रशंसापत्र
जुन 22, 2000
"मेरो श्रीमान् र म डेभिड र OASIS को मजा लिइरहेका छौं। मेरो डक्टरल स्तर मनोविज्ञान डिग्रीको अनुसरण गर्दै, मैले साइकोनेरोइम्यूनोलजी, तनाव र मनोविज्ञान, सम्मोहन, रूपक थेरापी, समाधान-केन्द्रित थेरापी र अन्य परम्परागत चिकित्सीय विधिहरूको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान गरेको छु। यो टेक्नोलोजीले मेरो तनाव कम गर्न र प्रदर्शन बृद्धिमा चासो व्यक्त गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। म निश्चित छु कि मेरा बिरामीहरूले तपाईको टेक्नोलोजीको मेरो पति जत्तिकै रमाईलो गर्नेछन् र ममा रमाईलो पनि गर्नेछु।
मेरो श्रीमान् अरबी पढ्दैछ। जब उनी DAVID को उपयोग गर्न थाले, उनले आफ्नो ग्रेड स्तर बढाए। म, अर्कोतर्फ, OASIS प्रयोग गर्छु जब म पढ्दै र लेख्दै छु। यस्तो लाग्दछ कि मेरो एकाग्रताले मेरो विचारमा सुधार भएको छ र मेरो कागजातहरू स्पष्ट छन्।
म तपाईको समर्पण र समर्थन को लागी व्यक्तिगत रूप बाट धन्यवाद दिन चाहान्छु।
मैले पत्ता लगाएँ कि डेभिड र ओएएसआईएस केवल तपाईको दिमागका लागि लाभदायक छैन तर तिनीहरू प्रयोग गर्न सजिलो र रमाईलो पनि छन्! त्यहाँ धेरै प्रोग्रामहरू छन् प्रयास गर्न को लागी र तपाईं आफ्नै सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। डेभको टेक्नोलोजी एउटा ठूलो लगानी हो जुन त्यसको टेक्नोलोजी हरेक पैसाको लायक छ। ”
डन कालिकबाट प्रशंसापत्र
सहयोगी प्रोफेसर, मनोविज्ञान, म्यासाचुसेट्स विश्वविद्यालय
जुलाई 6, 1998
डेभिडको लागि मेरो वारेन्टी फारममा आएको प्रश्नको उत्तरमा एक हप्ता वा सो भन्दा अघि मलाई तपाईको भ्वाइस मेल सन्देशको लागि म तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईंको व्यवसायको दैनिक-दिनका अपरेशनहरूमा तपाईंको व्यक्तिगत संलग्नताले तपाईंको उत्पादनहरूको निरन्तर गुणस्तरमा विश्वास जगाउँदछ।
अहिले सम्म म एक उपकरणको रूपमा डेभिडको शुद्धता, र यसले मलाई दिने नियन्त्रणको डिग्रीबाट प्रभावित छु। म अझै दिमागमा भन्छ कि यसले प्रभाव पार्ने डिग्रीको अन्वेषण गर्ने प्रक्रियामा छु कि म आराम र सतर्कताका लागि आफ्नो क्षमता अधिकतम बनाउन प्रयास गर्दैछु।
उमास बोस्टनमा लामो समयको फ्याकल्टी सदस्यको रूपमा, म धेरै विद्यार्थीहरूसँग काम गर्छु जो उनीहरूको ध्यान, ध्यान, र आरामदायी सुधार गर्न चाहान्छन्। म तपाइँका उत्पादनहरू सिफारिस गर्न हिचकिचाउँदिन एक पटक म उनीहरूले प्रदान गर्ने सुविधाहरूमा ठूलो विश्वासको बिन्दुमा पुगेको छु। ”
अप्रिल 10, 1997
"मेरो प्रणालीको स्तरवृद्धि गर्नका लागि तपाईको विचारशील उदारताका लागि म तपाईलाई पर्याप्त धन्यवाद दिन सक्दिन ... म एल / एसको बारेमा मेरो जीवनमा अत्यधिक प्रभाव पार्ने (र अरुको जीवन) को बारेमा भावुक भएँ तर मैले सोचें कि मेरो प्रणालीको विस्तारको सपना मात्र मेरो हो। वर्तमान वित्तीय (वा अभाव)। तपाईंले निश्चित रूपमा मेरो अनन्त वफादारी र कृतज्ञता प्राप्त गर्नुभयो। म प्रचार गर्नका लागि राम्रो कम्पनीको कल्पना गर्न सक्दिन।
न्युरो टेक्नोलोजीमा मेरो रुचि गत बर्षहरूमा धेरै विस्तार भएको छ। मेरो सबैभन्दा ठूलो जोश एक शक्तिशाली, synergizing र दिगो प्रभाव को लागी पौष्टिक उपचारको साथ विभिन्न प्रविधिहरूको संयोजनमा निहित छ। म यसका साथ ईईजी बायोफिडब्याकमा विस्तार गर्ने आशा राख्दै छु र मेरो कलेज डिग्री पूरा गर्दा, उपचार र शिखर प्रदर्शन बृद्धि गर्न कम "कम्पार्टमेलाइज्ड" दृष्टिकोणमा यी विधाहरूको अनौंठो विवाहको खोजी गर्न चाहन्छु। म विश्वास गर्दछु कि भविष्यको भविष्य एकदमै शक्तिशाली र दुवै फिल्डको विस्तारित हुनेछ। (जे होस्, यो मैले राखेको दर्शन हो)
म आशा गर्दछु र आशा गर्दछौं कि हामी न्यानो र पारस्परिक इनामदायी भविष्य, डेभ साझेदारी गर्न जारी राख्दछौं। तपाईं भविष्यको 'तरंग' को एक प्रमुख हिस्सा हुनको लागि एकल अनौंठो उत्पादन गन्तव्य निर्माण र ईन्जिनियर गर्नुहुन्छ। म यसको एक हिस्सा हुनमा मात्र गर्व गर्न सक्छु।
PS कृपया मेरो लागि तपाईको स्टाफलाई धन्यवाद दिनुहोस् !! "
जेम्स गोर्डनबाट प्रशंसापत्र
जनवरी 26, 1996
"म राम्रो सामान को बारे मा एक पुस्तक लेख्न सक्छ! बत्तीहरू उत्कृष्ट छन् र गुणस्तर र फिनिश उत्कृष्ट छ। आवाजमा जान दिनुहोस्, स्पन्दित टोनको आवाज छ ... आवाज मैले सुनेंको सबैभन्दा उत्तम हो, र यो आवाज मात्र हो जस्तो होइन, तर स्वर पनि धेरै, धेरै राम्रो छ, मैले सुनेको उत्तम । डेभिड हेडफोनहरू यति राम्रो छन् कि म तिनीहरूलाई मात्र प्रयोग गर्छु र अरू कोही पनि होइन, म तिनीहरूलाई संगीत पनि सुन्नको लागि प्रयोग गर्दछु, आदि। अरूलाई बाहिर फ्याँकें, डेभिडहरू महान छन्, होइन, सबैभन्दा उत्तम छ!
साथै म A A पनि दिन चाहन्छु कि पल्स रेट ०. H हर्ट्जसम्म जान सक्दछ, यो मेरो लागि धेरै फाइदाजनक छ, ऊताहरूको पुनरुत्थानका लागि, अन्य चीजहरूमा।
एकाईको आकार महान छ, धेरै सजिलो छ, यो मैले देखेको सब भन्दा सानो इकाई हो कि यती शक्तिशाली छ, त्यो हो। ”
जीन जैक्सनबाट प्रशंसापत्र
वालनट स्प्रिंग्स, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका
फेब्रुअरी 17, 1995
“मैले मेरो डेभिड र ओएसिस इकाई पाएको छु र उनीहरूको आगमनदेखि नै मैले तिनीहरूलाई नियमित रूपमा प्रयोग गरिरहेको छु। म वर्णन गर्न सक्दिन कि मैले यी दुई उपकरणहरूको प्रयोगबाट मैले यी कम्ति समयमा कत्ति धेरै फाइदा उठाएको छु। जे होस् म बेरोजगार छु र मेरो दुई बचत गर्न लाग्नु पर्ने दुईवटा मेशिनका लागि पैसा तिर्नु पर्‍यो, यो मूल्यको राम्रोसँग राम्रो भएको छ।
धन्यवाद अद्भुत उत्पादन र मैले तपाईंको कम्पनीबाट प्राप्त गरेको महान सेवाको लागि फेरि धन्यवाद। "
खुशी ग्राहकहरूबाट अधिक प्रशंसापत्रहरू
"डेभिडले मलाई आराम गर्न मद्दत गर्ने उत्कृष्ट कार्य गर्‍यो।" - आर। Chuickshank
"मेरो डेभिडसँग मैले धेरै राम्रा समयहरू बिताएको छु। मलाई लाग्छ कि मैले यसलाई प्रयोग गरेको पहिलो पटकदेखि नै मैले यसका साथ गहिरो आराम गर्न सिकेको छु र मैले सँधै आरामको महसुस गरिरहेको छु। मलाई लाग्छ कि यसले मेरो लागि ठूलो भिन्नता राख्यो र मैले अहिले healthy बर्ष पछि किन स्वस्थ महसुस गरेको छु भन्नेमा ठूलो सम्झौता थपेको छ। यदि तपाईंलाई आफ्नो कामको लागि गर्व छ भने, राम्रोसँग, तपाईं यो योग्य हुनुहुन्छ। ” - स्कट माइनर्स, इस्काकु, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका
"डेभिडसँग अहिलेसम्मको मेरो अनुभव अतुलनीय छ। यो उपकरणको मेरो व्यक्तिमा गहिरो प्रभाव पार्ने सम्भाव्यता छ। " - एडमंड एबट, टोडमर्डन, इ England्ग्ल्यान्ड
"मेरो डेभिडमा कीप्याड मर्मत गर्न अत्यन्त नै छिटो र मैत्री सेवाका लागि धन्यबाद। यदि मेरा सबै व्यवसायिक साझेदारहरू तपाईंजस्तै थिए भने म धेरै खुसी हुनेछु। ” - डेरिल क्रिश्चियनसन
“मैले हिजो डेवको पुस्तक प्राप्त गरें र यसमा पहिले नै डुबेको छु। उसको दर्शन र बुद्धिको लागि मलाई बधाई छ। ” - जोसलिन कोर्भिले, म्याडिसन, विस्कन्सिन, संयुक्त राज्य अमेरिका
"धन्यबाद ठूलो समय। म काटिएको छु डेभ Siever एक भयानक मानिस हो र यो कम्पनी सुपर भयानक छ। " - प्रिस्किल्ला हल, उत्तरी एटलबरो, म्यासाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका
"द्रुत सेवाबाट चकित! मैले अर्डर गर्नु अघि यस उपकरणको प्रयास गरेको छु र यो एकदम आरामदायी छ। मलाई आराम गर्न मलाई यति धेरै निद्रा चाहिएको थिएन कि म कार्य गर्न आवश्यक पर्दछ। म एक दिनमा १० घण्टा देखि डेभिड hours घण्टा डेभिडको साथमा सुत्ने समयको लागि गएँ। ” - सुजान मार्कोट, मोन्ट्रियल, क्यूबेक, क्यानडा
"यो एक अद्भुत उत्पादन हो। यो in बर्षमा पहिलो पटक हो कि मैले गहिरो पुनर्स्थापनाात्मक निद्रा पाउन सकेको छु। धन्यवाद।" - Diane निमर, गोल्डन भ्याली, मिनेसोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका
“हामी दुवैले यो आनन्द लिन्छौं र यसलाई दैनिक प्रयोग गर्दछौं। मैले अन्तमा मलाई शान्त र आरामदायी बनाउन केही चीज भेट्टाएको छु। ” - न्यान्सी र ब्रुस थॉमसन, एडिना, मिनेसोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका
"महान सेवा र वितरण समय। धेरै राम्रा गाईड र म्यानुअल जुन बुझ्न र प्रयोग गर्न सजिलो छ। ” - ब्रायन फारर, पीएचडी।
“अन्ततः यो अद्भुत उपकरण पाउँदा म खुसी छु। मैले एउटा खरीद गर्न दश बर्ष भन्दा बढी पर्खाईएको छु। यो मैले आशा गरेको सबै भन्दा बढी हो। धन्यवाद।" - हुबर्ट हेल्टन